भीम रावललाई मन्त्री बनाएर भएपनि एमसीसी पा,रित गर्ने तयारी,के यो होला त ? आफ्नो बिचार राख्नुहोस! – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
भीम रावललाई मन्त्री बनाएर भएपनि एमसीसी पा,रित गर्ने तयारी,के यो होला त ? आफ्नो बिचार राख्नुहोस!
काठमाण्डौँ -: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा पनि एमसिसी सं,सोधन नगरी यत्तिकै पा,रित गर्ने पक्षमा छन। प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमै भी,म रावललाई ज,वाफ फ,र्काउँदै भनेका थिए, चो,र ढो,काबाट होइन, मुल ढो,काबाटै ल्याएर एमसिसी पा,रित गरिन्छ।
ओलीले यसो भनिरहँदा नेकपाका अर्का अध्यक्ष दाहाल मौन छन्। जब कि यो अ,नुदान ल्याउन तत्कालिन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र र अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले पनि भूमिका खेलेका थिए। डा’क्टर बाबुराम भट्टराई वर्षमान पुन खिलराज रेग्मी शंकर कोइराला सुशील कोइराला डाक्टर रामशरण महत शेरबहादुर देउवा पुष्पकमल दाहाल कृष्णबहादुर महरा बिष्णु पौडेल लगायतले प्रधानमन्त्री र अर्थ मन्त्रीका है,सियतमा एमसिसी ल्याउने प्रक्रियामा सहभागि भएर प्रत्यक्ष काम गरि सकेको यो सहायता रकम बारे अहिले नेपाली नेताहरु कै का,रण अन्योल भएको छ।
अहिले सम्झौता अगाडि बढाउन नेकपालाई नेपाली कांग्रेस र स्वयम् शेरबहादुर देउवाले द,बाब दिइरहेका छन्। ‘एमसिसीको सबैभन्दा धेरै वि,रोधमा उत्रिएका भीम रावललाई घनश्याम भुसाललाई जस्तै मन्त्री पद दिएपछि तह लागिहाल्छन् नि नेपाली कांग्रेस स्रोतले भन्यो, ‘प्रधानमन्त्री ओलीले यस विषयमा माधव नेपालसँग पनि छलफल गरेको बुझिएको छ। त्यसपछि सम्झौता पास गर्न कसैले छेक्दैन।एमसिसी नेपालकै हि,तमा रहेको कांग्रेस स्रोतको दा,बी छ भने नेकपा नेताहरुको ठूलो पङ्क्ति पनि यसलाई स्विकार्ने पक्षमा देखिएको छ।
मूलतः साना वामपन्थी दलहरु र उग्र राष्ट्रवा,दी धारका व्यक्तिहरु यसको वि,रोधमा देखिएका छन्। एमसिसीको बि,रोध नीतिगत र नेतृत्वदा,यी तहमा भन्दा दल भित्र वि,पक्षमा रहेका, नेतृत्व प्रति असन्तुष्ट र समाजिक सञ्जाल तथा सडकमा बढी देखिएको छ। नेकपाले यसलाई निर्क्योल गर्न नेता झलनाथ खनाल ने,तृत्वमा प्रदीप ज्ञवाली र भीम रावल रहेको समितिले भने जस्ताको तस्तै पा,रित नगर्न सु,झाव दिएपछि अझै अन्योल थपिएको हो । श्रोत – थाहा खबरबाट
Next को’रोना उपचारमा खटिएका डाक्टरको हात देखेर भा’वुक बने मानिसहरु! सलाम छ ।